Apple Music ayaa dhowaan laga yaabaa inay ku jirto PlayStation 5 consoles | Waxaan ka imid mac
Apple Music ayaa dhowaan laga yaabaa inay ku jirto PlayStation 5 consoles
Xanta cusub waxay muujineysaa in goor dhow aan arki karno Apple Music iyada oo loo marayo console -kii ugu dambeeyay ee Sony, PlayStation 5. Maaha warar xan ah oo waalan ilaa iyo hadda waxaan ku raaxeysan karnaa adeegyada Apple qaarkood aaladaha kale ee aan astaanta ahayn. Tusaale ahaan Apple TV iyada oo loo marayo TV -yo caqli badan iyo xitaa Xbox. Waqtigan xaadirka ah ma jiro isgaarsiin rasmi ah oo ka socota Apple ama Sony, laakiin isticmaale kale ayaa horay ugu arkay menu -ka qunsulka.
Apple waxay leedahay adeegyo badan oo uu heli karo isticmaalaha. Qaarkood, badankood, waxay gaar u yihiin Apple waxaana lagu arki karaa oo keliya qalabka shirkadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa kale oo loo adeegsan karo aalado kale. Waxaan ka hadlaynaa tusaale ahaan Apple TV oo laga heli karo telefishannada caqliga leh iyo xitaa qalabka ciyaarta fiidiyaha. Markaa fikradda ah inay awood u leedahay helitaanka Apple Music iyada oo loo marayo PlayStation 5 waa war aad u macquul ah.
Gaar ahaan goorta isticmaalaha Reddit ayaa soo sheegay inuu ku arkay menu -ka qunsuliyaddiisa, awoodda uu u leeyahay inuu muusig ku ciyaaro isagoo adeegsanaya adeegga shirkadda Mareykanka ah. Kaliya maahan Spotify laakiin sidoo kale Apple Music. Waqtigan xaadirka ah ma jiro wax xaqiijin ah oo ka yimid Apple ama Sony, laakiin Waxaan u maleynayaa inaysan waqti dheer qaadan doonin si aan rasmi u noqdo oo awood u leh inaad ku raaxaysato liistada muusigga Apple intaad daalacanayso menus -ka console.
Isticmaalaha su'aasha, ayaa warka u geliyay madasha Reddit:
Ilaa goorma ayay tani dhacdaa? Waxaan koonto cusub ku sameeyay PS5 -kayga oo waxaan doonayay inaan ku xiro Spotify -kayga, laakiin markaa waan arkaa tan
Sida xanta oo dhan waqtiga kaliya ayaa sheegi doona haddii ay run tahay iyo haddii kale. Inkasta oo sidaan hore u sheegnay, haddana ay suurtogal tahay inay dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple Music ayaa dhowaan laga yaabaa inay ku jirto PlayStation 5 consoles
2022 MacBook Air ayaa sidoo kale ku dari doonta naqshad heer sare ah
Maanta Oktoobar 18 waxaan leenahay dhacdo cusub oo Apple ah: La sii daayay